9 tilmaamood oo qurux badan nin walbana wuxuu u baahan yahay inuu ogaado | Ragga Stylish
Alicia tomero | | La xiiray, Is-qurxinta, Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon
Quruxda labku waa mid lagu qiimeeyo laguna qiimeeyo sida quruxda dumarka, inkasta oo aynaan sidaa ula qabsan. Waxaa jira rag badan oo jecel inay sifiican u ekaadaan oo ay daryeelaan muuqaalkooda, wajigooda, timahooda ... waana sababtaas waxay jecel yihiin inay wax u akhriyaan waqti ka waqti sidii ay u kordhin lahaayeen hankooda oo soo hel talooyinka quruxda. Si tan loo sameeyo, waa inaad sameysid is-daryeelid oo aad ogaataa sida loo beero qaab nololeed.
Waxaa jirta xaqiiqo muhiim ah oo ku saabsan daryeelka maqaarka ragga oo aad uga duwan tan haweenka. Xuubka epidermis waa 30% dhumuc weyn, waxaa ku jira qanjirro badan oo dheecaan leh oo dalooladeeda ayaa aad caan u ah. Gabagabadii, maqaarkaagu aad ayuu ugafiican yahay uguna da 'weynyahay sidaa darteed daaweyntaadu waxay gebi ahaanba ka duwanaan doontaa tan dumarka.
1 Daryeelka aasaasiga ah ee ninka
2 Tilmaamaha quruxda raga
3 Muxuu ninku ku ridayaa shandadiisa musqusha?
Daryeelka aasaasiga ah ee ninka
Wejigu waa milicsiga nafta taasna waxay u horseeddaa qaar badan oo ka mid ah talooyinka quruxda badan iyo daaweynta ee diiradda saaraya bartaas. Waa inaad ogaataa sida loo xakameeyo PH maqaarka, maadaama uu ka hooseeyo kan dumarka oo u nugul wasakhda iyo finanka. Markay sannaduhu dhammaadaan, maqaarku wuu qallalaa waana taas sababta uu si lama filaan ah ugu soo bandhigo astaamahaas gabowga ah ee sidaa u calaamadeysan.
Indhuhu sidoo kale waxay ka tarjumayaan sannadihii la soo dhaafay iyo niyadda ama xaaladda shaqada ee jirkaaga. Ogaanshaha sida loo daryeelo aaggan sidoo kale waa lagama maarmaan sida meesha aad xiirtay, maadaama ay u nugul tahay xasaasiyadda oo ay si fudud uga falcelin karto dhacdo kasta oo lama filaan ah.
Daryeelka timaha sidoo kale waa muhiim, iyo sidoo kale haddii aad leedahay timo gaaban, dheer, qafiif ah ama qurux isku mid ah gadhka. Waxaad ku akhrisan kartaa sida loogu yeesho daryeel aan fiicnayn timahaaga adoo akhrinaya maqaalkan ama sida loo xanaaneeyo gadhkaaga talaabo talaabo adoo gujinaya isku xirkaan
Daryeelka shakhsi ahaaneed ee jirkaaga sidoo kale saameyn badan ayuu ku leeyahay jir ahaan iyo maskax ahaanba. Haddii aad ka mid tahay kuwa aan raacin cunno sax ah oo ay tahay mid qasan waxaad isku dayi kartaa halkan ka akhriso cawaaqibka cunno xumida. In si joogto ah loo ciyaaro isboorti sidoo kale waa muhiim oo had iyo jeer waxay u adeegtaa talo asaasi ah.
Tilmaamaha quruxda raga
Waa muhiim inaad iskaa u hesho jidh firfircoon oo nasasho leh. Hurdada 7 ilaa 8 saacadood maalintii waa furaha, sidoo kale cunista cunno sax ah iyo jimicsi iyadoo la raacayo amar ama sharciyeyn. Laga soo bilaabo halkan Waxaad had iyo jeer heli doontaa jir firfircoon taasna waxay ka muuqan doontaa muuqaalkaaga.
Waa inaad ilaalisaa timahaaga: dhaqida timaha sida saxda ah waa muhiim. Waa in lagu sameeyaa maalin kasta oo kale shaambo ku habboon nooca timahaaga. Haddii, dhinaca kale, aad ciyaareyso isboorti ama aad heysato nooc shaqo ah oo kaa doonaya inaad dhaqdo maalin kasta, had iyo jeer dooro shaambo maalin kasta loo isticmaalo.
Xiirashada xiirista ama gadhka: Xaaladda xiirashada, isku day inaad sameyso ka dib qubayska, maxaa yeelay waxay fududeyn doontaa ficilkeeda. Kadib mari wanaagsan kadib xiir si aad iskaga ilaaliso carada. Haddii ay tahay waxaaga in la ilaaliyo gadhkaaga, marwalba u isticmaal shaambooyada timaha noocan oo kale ah oo mari saliid si aad u daweyso oo aad uga dhigto mid caafimaad qaba oo aan adkayn badan lahayn.
Daryeelka wajiga, ku maydh wejigaaga maalin kasta biyo qabow oo isticmaal qoyaan wanaagsan maalintii inta lagu jiro. Ha iloobin inaad sidoo kale daryeesho indhahaaga, tan dooro dusha isha ee ugu fiican maxaa yeelay waxay noqon doontaa aasaasi.
Waa muhiim inaad yeelato biinanka qurxinta leh ee u muuqda kuwo dabiici ah oo ballaadhan, oo aan khafiif ahayn oo tilmaaman.
Gubashooyinka dhinacyada sida timuhu waa lama huraan inay had iyo jeer u muuqdaan kuwo wanaagsan, hagaagsan oo quruxsan. Waa in lagu sifeeyaa isla dhererka midba midka kale waana in aan waligood laga jarin meel ka sareysa dhegta.
Habeenki sidoo kale isticmaal qoyaan wanaagsan wajiga. Waad ku raaci kartaa xoogaa biyo ah. Noocyada noocan oo kale ah ayaa sida ugu fiican u shaqeeya intaad seexanaysid maaddaama geeddi-socodka dib-u-cusbooneysiinta maqaarku uu shaqeynayo inta u dhexeysa 2 ilaa 4 subaxnimo
Haddii aad jeceshahay inaad ka gudubto daryeelkaas aasaasiga ah, waa mudan tahay inaad sameyso diirka wajiga hab guriga lagu sameeyo iyo qaab caadi ah maadaama ay kaa caawin doonto ka-saarista nijaasta. Maaskarada ayaa sidoo kale kaa caawin doonta kor u qaadista muuqaalkaaga maaddaama maaddooyinkooda firfircoon ay dhex galaan maqaarkaaga ayna abuuraan fuuq dheeri ah.
Jirka intiisa kale waa midka ugu badan ee la ilaaway, laakiin sidoo kale Waxaan daryeeli karnaa qoortayada, kala-goynta, gacmaha iyo cagaha. Tan waxaad si faahfaahsan uga akhrisan kartaa sida «ku dhiib aragtida ugu fiican gacmahaaga»Ama hage loogu talagalay«sida loo helo cagaha ugu habboon ee la xidho xagaaga ».
Muxuu ninku ku ridayaa shandadiisa musqusha?
Waxay umuuqataa mid xiiso leh in loo maleeyo in ninku yeelan karo boorso musqusha leh oo leh alaab qurux badan, laakiin xaqiiqda ayaa ah in haa, sida caadiga ah waxay sidoo kale jecel yihiin inay qaadaan alaabooyinkooda maxaa yeelay iyaguna way is daryeelaan. Rag badan, qaadashada boorsada musqusha waa lagama maarmaan mana seegi doontid: caraf udgoon, huurka wejiga, cadar, waxyaabaha xiirista sida xiirashada ka dib, iyo jel ama shaambo. Haddiise qof xoogaa ka sii daran yahay daryeelkiisa, waxaa jiri doona xitaa a hagaajinta bushimaha dibnaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » 9 tilmaamood oo qurux badan nin walbana wuxuu u baahan yahay inuu ogaado